iButlers ‘R’ Us ihambisa iinkozo – Ntu News
Unyaka ka 2020 ibingunyaka onzima kuthi sonke, kodwa uAsanda Magaga wase Monti ubone kulelona xesha lokuqalisa eyakhe inkampani kusekho lo bhubhane I Covid-19.
Ngexa yomiso ngxi lwentshukumo ngurhulumente oluqale kulonyaka uphelileyo kweyoKwindla, izinto ezinitsi ziye zatshintsha. Oko ke kuthe kwazisa ubunzima kumashishini nezinye izinto.
Inkampani iButlers ‘R’ Us iqale ukusebenza nje ngohambiso lwenkozo kubantu base Monti. “Abantu bebenditsalela umnxeba bandixelele into abayifunayo, ndiyokubathengela ndizise kubo,” utshilo uAsanda. Kulonyaka ka 2021 iqale ukusebenza nje nge venkile edijithali apho abantu bakwaziyo ukuthengisa khona ukutya, kunye nemisebenzi yabo efana nomsebenzi wobugcisa neminye. Lo nto ke ithi incedise ekuphuhlisenii amashishini amancinci asekuhlaleni.
“Ndinqwenela lenkampani ikhule ikwazi ukuyofikelela kubantu base Qonce kunye nase Komani.” “Ndifuna amashishini amancinci asekuhlaleni abhalise ne Butlers ‘R’ Us ekuncediseni ekuwaphuhliseni nokwaziwa kwawo, ndiphinde ndivule amathuba emisebenzi kubantu abangafumani mathuba okuqhubekeka nemfundo yabo,” utshilo uMagaga oligosa eliphethe I ofisi.
-Amashishini afuna ukubhalisa ne Butlers ‘R’ Us angatsalela umnxeba kule nombolo 062-343-2618 okanye athumele imeyile kubutlersus20@gmail.com. Ngekncukacha ezithe vetshe, ndwendwela I web sayithi yabo ku www.butlersus.co.za okanye undwendwele ikhasi labo lonxibelelwano ku Facebook Butlers “R” Us.
English version to download below
← Embo Azania putting its mark on the map
SME Competition Winner takes it all →